Flash Season 2၊ CW ပွဲများသည် Netflix တွင်စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်ရှိနိုင်သည် - တီဗီ
Flash Season 2၊ The CW ပွဲများသည်စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် Netflix တွင်ရှိနိုင်သည်
အကြွေး: The Flash - The CW
Arrow, The Flash, CW ပွဲများသည်စက်တင်ဘာလတွင် Hulu မှထွက်ခွာမည် iZombie Season3သည် CW နှင့် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။
Flash Season 2, Arrow Season4နှင့် The CW ပွဲများအားလုံးရာသီအသစ်များသည်စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် Netflix သို့လာနိုင်သည်။
Hulu သည်စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ စတင်၍ CW အစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်သည့်အစီအစဉ်မှထုတ်ပယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည် Flash ကို ရာသီ 2, မြှား ရာသီ4နှင့် CW ပွဲအားလုံးရာသီစက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် Netflix တွင်ဖြန့်ချိမည်။
ဘာလို့မေးတာလဲ ကောင်းပြီ၊ ရှည်လျားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့ရှင်းပြဖို့အချိန်ယူရလိမ့်မယ်။ ဒါကိုထင်မြင်ချက်လို့ပြောခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကို ဦး စွာရှင်းလင်းပြောပြပါရစေ။ ငါထွက်ရှာရန် Netflix ကိုထွက်ရောက်ရှိခဲ့ကြသော်လည်း, ငါပြန်ကြားမရကြဘူး။
သငျသညျကြားသိကြလိမ့်မည်အဖြစ်, ဒီနွေရာသီအစောပိုင်းက Netflix နှင့် The CW အဆိုပါ CW ပြပွဲအားလုံး Netflix ကရောက်စေဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ Netflix သည်ထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအတွက်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးဆပ်ခဲ့ပြီး၊
ဒီသဘောတူညီချက်မတိုင်မီက Hulu သည် CW နှင့်ရာသီဥတုရှိခဲ့သည် သူတို့ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်နောက်တစ်နေ့တွင်ကြည့်ရှုသူများသည် The CW ၏အစီအစဉ်များကို Hulu တွင်ထုတ်လွှင့်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Hulu သည်ကြည့်ရှုသူများအား Hulu သို့စီးဆင်းရန်အတွက် CW ပွဲများအားလုံး၏နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်ငါးခုကိုလည်းသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ CW နှင့်အတူ Netflix ရဲ့သဘောတူညီချက်အတွက်စက်တင်ဘာလ 18 ရက်နေ့တွင်ဖြစ်သွားမယ့်ပုံရသည်ဖြစ်သောအရာ, ကန်စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, Hulu အဆိုပါ streaming ကိုဝန်ဆောင်မှုကနေအားလုံး CW ပြပွဲဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
Pose ရာသီ3သည် Netflix တွင်ရှိပါသလား။
အခုအချိန်မှာကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံး Netflix ၅၀ ကပြတယ်
ယခုတနင်္ဂနွေနေ့ကို Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးပွဲ ၅ ခု - မေ ၁-၂
Spider-Man - Riverdale ကြယ်ပွင့် Lili Reinhart သည် Spider-Gwen အဖြစ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောပုံများနှင့်ကိုက်ညီသည်
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ ၃၅ ခု
အပြန်အလှန်အားဖြင့် Netflix သည် The CW show မ်ားအားလုံး၏ရာသီများကို United States ရှိသူတို့၏ streaming service တွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ဤပြwithနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အတားအဆီးများမရှိဟုယူဆရပြီးစက်တင်ဘာလတွင် CW နှင့် Netflix တို့ကရာသီဥတုအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်လိုကြသည်။ Flash ကို ရာသီ 2, မြှား ရာသီ4နှင့်ကျန် CW ပွဲများအားလုံးကို Netflix တွင်ထည့်သွင်းသင့်သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်း CW အစီအစဉ်များအားလုံးရာသီများသည်အောက်တိုဘာလတွင် The New CW ပွဲမတိုင်မီ Netflix သို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရာသီအား Netflix ကြည့်ရှုသူများအတွက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
တနည်းကား၊ ၎င်းသည်ထင်မြင်ချက်မျှသာဖြစ်သည်၊ သို့သော် Hulu အနေဖြင့် CW ပွဲများအားလုံးကိုဆွဲယူရန်မှာအလွန်ထူးဆန်းပြီး Netflix ကသူတို့ကို streaming service တွင်မလွှတ်ပေးပါ။ Netflix အားထိုသို့ပြုခြင်းမှတားဆီးသောအခြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်ဘာသာစကားမရှိလျှင်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Netflix ကလာမည့်သီတင်းပတ်တွင်စက်တင်ဘာလအနည်းငယ်ဖြန့်ချိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ စက်တင်ဘာလတွင် Netflix သို့လာလျှင် CW ပွဲများသည်ထိုစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
သတိရပါ - အကယ်၍ CW ပွဲများ၏ရာသီများသည်စက်တင်ဘာလတွင် Netflix သို့မလာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မူလကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သည့်အတိုင်းနှင့် CW ရှိသူတို့၏သက်ဆိုင်ရာရာသီ၏ Premiere date မတိုင်မီအောက်တိုဘာလတွင် Netflix သို့ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
ပိုများသော netflix:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀
Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးပြသမှုအချို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်၊ streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများအတွက် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ၏အဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ဖျက်သိမ်း Netflix မူရင်း
ယခုတနင်္ဂနွေမှာကောင်းသောကောင်းသော Netflix ရုပ်ရှင် ၅ ခုသည်၎င်း၏တစ်ဝက်၊ အနာဂတ်သို့ပြန်သွားရန်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
Hulu က The Path အတွက်ပိုစတာအသစ်ထုတ်
Chewing Gum Season2သည် Netflix တွင်စီးဆင်းနေသည်
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရပ်တည်ချက်အကောင်းဆုံးဟာသ (၅၀) ။ Watch Louis C.K. အထူး
ကြည့်ရှုရန်ကောင်းသောကောင်းသော Netflix ရုပ်ရှင် ၅ ခု - စည်းချက်သံ၊ Adam DeVine အထူးနှင့်ပိုမို
ဘယ်က de Cuervos ရာသီ ၂ သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်မည်နည်း။
အွန်လိုင်းပေါ်မှ The Walking Dead: ရာသီ ၉၊ အပိုင်း ၁၅ ကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ပါ
of the Ring of the Lord: လက်စွပ်၏မိတ်သဟာယဖွဲ့မှုသည် Netflix တွင်ရှိသည်
အွန်လိုင်း Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ Watch: ရာသီ 15, ဇာတ်လမ်းတွဲ5တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ
Justice League - HBO Max နှင့်အခြား Snyder Cut နေ့စွဲကိုထုတ်ဝေသည်
Hulu: Super Bowl LII အတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် Hulu ကိုဘာကြည့်မလဲ
Sense8 ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း - ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၈။ ငါလိုချင်သမျှတစ်ခုသည်နောက်ထပ်ကျည်ဆန်ဖြစ်သည်
netflix ပေါ်ထွက်လာတဲ့ flash4ရာသီဟာဘယ်အချိန်လဲ
အဘယ်သူသည်ပယင်း Marshall ချိန်းတွေ့သည်
ရာသီတစ် ဦး သင်တစ် ဦး ဖြစ်ကြသည်
Netflix ရဲ့ Mudbound: ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ, အချိန်, နောက်တွဲယာဉ်, အနှစ်ချုပ်နှင့်ပိုပြီး
၂၀၁၈ Aprilပြီလတွင် Netflix မှထွက်ခွာခြင်း - Shawshank ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အခြားအရာများ
လိမ္မော်ရောင်သည် New Black: ရာသီ (၆) အဆုံးသတ်ခြင်းသည် Piper အတွက်ရာသီ (၇) တွင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း
Emmys Red Carpet 2017: အနီရောင်ကော်ဇောကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်နည်း။
Netflix မတ်လရူးသွပ်မှု: 4. ပန်းခြံများနှင့် Rec vs. 5. ကောင်းမွန်သောနေရာ